Khitthit Myanmar - News & Media
သောကြာ သား သမီးများ အတွွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ တစ်လလုံးစာ ဗေဒဟောစာတမ်းနှင့် ယတြာများ..
AlinnMyay(အလင်းမြေ) မီဒီယာမှ ပရိတ် သတ် ကြီး အတွက် November 2019 လ အတွင်း ဖြစ်ပေါ် လာ မည့် ၇ ရက် သားသမီး များ အတွက် ၊ သိင်္ခမောင် ဗေဒင် ကံကြမ္မာ ဟောစာတမ်း ……… အလင်းမြေ […]
MTV ကိစ္စကနေ တဆင့် ပရိသတ်တွေနဲ့ပါ ပိုပြီး ပွဲဆူလာတဲ့ မေပန်းချီ
နာမည်ကြီးနေတဲ့ video ထဲကလူတွေကို ချီးတွင်းကြီးကြည့်နေရသလိုပဲလို့ဒဲ့ဆော်လိုက်တဲ့ မေပန်းချီ မော်ဒယ်မင်းသမီး မေပန်းချီက ရှု့မငြီးရဲ့ MTV အကြမ်းစားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခုလိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ် “ပြီးရင် မီဒီယာသမားတွေ အဲ့တစ်ယောက်ကို သွားဗျူး အုံးမယ်”… “ပြီးရင် အဲ့တစ်ယောက်က အင်တာဗျူး ဖြေရလို့ ပေါက်ပြီ အောင်မြင်တယ် ဆိုပြီး မာန်က […]
ကြာသပတေး သား သမီးများ အတွွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ တစ်လလုံးစာ ဗေဒဟောစာတမ်းနှင့် ယတြာများ Alinn Myay ( အလင်းမြေ ) မီဒီယာမှ ပရိတ် သတ် ကြီး အတွက် November 2019 လ အတွင်း ဖြစ်ပေါ် […]
တောက ရမ်းကု ဒေါက်တာနဲ့ မြို့က ပညာစမ်းတဲ့ မမတွေ့ကြလေသောအခါ
တောက ရမ်းကု ဒေါက်တာနဲ့ မြို့က ပညာစမ်းတဲ့ မမတွေ့ကြလေသောအခါ နယ်မြို့သေးသေးလေးတွေမှာ… ရမ်းကုတွေခေတ်ကောင်းစဉ်ကပေါ့ ရမ်းကုတယောက်ကတော့ တော်တော်နာမည်ကြီးတယ် ကြီးရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်း ဘာရောဂါပဲဖြစ်ဖြစ် သူပေးတဲ့ဆေးကတော့.. ဘာမီတွန်ပဲ အာ့ကြောင့် နာမည်အရင်းတောင်ပျောက်ပြီး အားလုံးသိကြတာကတော့ သူ့နာမည် ဒေါက်တာဘာမီတွန် တနေ့တော့ .. မြို့ကြီးကနေ အလည်ရောက်လာတဲ့ မတ်မတ်တယောက်က ဒေါက်တာဘာမီတွန်ကို […]
KHITTHIT MYANMAR provide celebrity, life style, breaking news, local news and international news. Articles are displayed in text, video and photos. Visitors can read news in articles type of categories in https://khitthitmyanmar.com (example – News, Entertainment, Sport, Health, Celebrities, Media & Music….etc). Hope our visitors enjoy our website.